#TheOccupation of Wikipolitics: မက္ကစီကို၌ စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုဖြင့် တကျော့ပြန် ဒီမိုကရေစီ တီထွင်ခြင်း · Global Voices မြန်မာ
Translated (en) byStephanie Crane
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 30 အောက်တိုဘာ 2017 15:36 GMT
ဤစာပုဒ်​ကို အောက်​ပါ​ ဘာသာ​စကား​များ​တွင်​လည်း ဖတ်​ရှု​နိုင်​ပါ​သည် English, Français, Español
Image from the press kit available at laocupación.org. Reproduced with permission.
မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၏ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော ဂွါဒါလာဟာရာ(Guadalajara)မြို့၌ သိပ်မကြာသေးခင်က “The Occupation“(သိမ်းပိုက်ခြင်း)ဟု အမည်ရသော ပွဲတော်တစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရပ်ရွာတွင်းကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာများကို စုပေါင်းအဖြေရှာကြရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်သူများစုပေါင်းထားသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် Wikipolitics Jalisco က ဦးဆောင်စီစဉ်သော ပဏာမခြေလှမ်းများထဲမှ ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတော်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအစုံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပါဝင်ခဲ့သည့်အပြင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် တက္ကသိုလ်ပညာရပ်အသိုင်းအဝိုင်းတို့ကလည်း ပြည်သူများဖြင့်ပူးပေါင်းကာ ဟာလိစ္စကို (Jalisco) ပြည်နယ် ဂွါဒါလာဟာရာမြို့တွင် သြဂုတ် ၃၀ မှ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်ထိ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတို့နှင့်ပက်သက်သည့် ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှပြောပြခဲ့ကြပါသည်။
Tenemos que hacer que más personas se emocionen por la política y no se sientan solas, para eso hay que organizarnos. #LaOcupación
— Wikipolítica Jalisco (@WikipoliticaJal) August 31, 2017
ကျွနု်ပ်တို့ ဒီလိုစီစဉ်ရခြင်းကတော့ လူတွေကို နိုင်ငံရေးအကြောင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ပိုစိတ်ဝင်စားလာစေဖို့နဲ့ ဒါဟာ သူတို့တွေကြီးသပ်သပ်ပဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်သွားစေဖို့ပါ။ #LaOcupación (#သိမ်းပိုက်ခြင်း)
လက်ရှိအကျင့်ပျက်ချစားသည့် နိုင်ငံရေးသမားများကို အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနေသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း၏ ကြွေးကျော်သံဖြစ်သော #FueroNoJuicioSí (#တရားစီရင်ခြင်းမလို,တရားမျှတာမှုသာလိုသည်) လှုပ်ရှားမှု နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ အသုံးချပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်နေသော ပြည်သူပိုင်အရင်းမြစ်များကို လျှော့ချရန်ကျိုးပန်းသော #SinVotoNoHayDinero (#မဲလည်းမပေး၊ပိုက်ဆံလည်းမပေး) လှုပ်ရှားတို့မှုကို ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စတင်ခဲ့ကြသည်။ The Occupation ပွဲတော်သည် Wikipolitica ၏ အစီအစဉ်ထဲမှတစ်ပိုင်းအဖြစ် ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဝေမျှမှုနှင့် ပူးပေါင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းဖော်ဆောင်မှု စသည်တို့ကို အထောက်အပံ့ပြုရန်ရည်ရွယ်လျှက် ရှေ့ဆက်တိုးတက်ပြောင်းမှုကိုရရှိစေမည့် ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
ဤလှုပ်ရှားမှု၏ ရှေ့တန်းမှပါဝင်နေသူတစ်ဦးကတော့ ၂၀၁၅ တုန်းက ဟာလိစ္စကို (Jalisco) ပြည်နယ် ဥပဒေပြုလွှတ်တော် (ကွန်ဂရက်)တွင် အမတ်နေရာရခဲ့သည့် မက္ကစီကိုမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ပေဒရိုကူမာမိုတို (Pedro Kumamoto) ဖြစ်ပါသည်။
The Occupation (သိမ်းပိုက်ခြင်း) ဆိုသည်မှာ မက္ကစီကို နိုင်ငံရေးလောကအတွင်း အကျင့်ပျက်သောအပြုအမူများအလွန်အကျွံပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို သိသိသာသာမြင်ရခြင်းအပေါ် ပြည်သူများအနေနှင့် အံသြတုန်လှုပ်ရပြီး စိတ်ပျက်ရသောကြောင့် နိုင်ငံရေးပုံစံအသစ်ကို အထောက်အပံ့ပြုလုပ်ရန် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
ပျက်စီးနေသောနိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် မူဝါဒများမှ အုပ်စိုးထားသောနေရာများနှင့် နိုင်ငံရေးကို ပြည်သူလူထုထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက် ပွဲတက်ရောက်သူများသည် အားသွန်ခွန်စိုက်ရှိကြသည်။
မက္ကစီကိုမြို့တော် Wikipolitica chapter ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Roberto Castillo မှ သူ၏ ဆောင်းပါး “The Occupation: Why Politics Doesn’t Have to Be Boring, and Why Is It Better if We All Get Involved?” (သိမ်းပိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပျင်းစရာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံး ပါဝင်မှသာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း) တွင် ရေးသားထားသည်မှာ
Nos alejaron de la política.
La llenaron de corrupción, impunidad y cinismo.
Pero ya volvimos. Y vamosacambiarla por completo.
Mucho de lo que hacemos es política
La política no es solo aquello que se hace en el congreso desde las curules de los diputados, mucho menos se reduceadiscursos de gente trajeada en un atril, que lleva por título “presidente” o “gobernador”. Fuera de ese mundo hemos estado construyendo una gran variedad de formas de participar en la vida política de manera más cercana y útil para todas y todos nosotros.
သူတို့က ကျွနိုပ်တို့ဆီက နိုင်ငံရေးကို ယူသွားကြတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့က အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း၊ တရားဥပဒေမဲ့ခြင်း၊ အဆိုးမြင်ဝါဒ စတာတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးထဲကို ဖြည့်လိုက်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွနု်ပ်တို့ ပြန်လာကြပြီ။ ပြီးတော့ ကျွနု်ပ်တို့ အဲ့ဒါကို လုံးဝပြောင်းပစ်ကြမယ်။
ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်သမျှတော်တော်များများက နိုင်ငံရေးပဲ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှ အမတ်တွေကနေ သပ်သပ်ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဟောပြောစင်နောက်ကနေ စာဖတ်ဖတ်ပြောနေတဲ့ မြို့တော်ဝန်တို့ သမ္မတို့လို ရာထူးကြီးတွေနဲ့သူတွေ လုပ်ရမယ့် အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာအပြင်ဘက်မှာ ကျွနု်ပ်တို့အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်ပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးဘဝမှာ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမျိုးစုံကို စုဆောင်းနေလျက်ရှိပါတယ်။​
ပွဲတော်လေးရက်သည် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးမှုများ၊​ ညီလာခံများ၊​ အသိကြွယ်စေသောဟောပြောပွဲများ၊​ အနုပညာ-ယဉ်ကျေးမှုအစီအစဉ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေကာ ပြောင်းလဲမှုအတွက်ရည်ရွယ်သော လှုပ်ရှားမှုများ၊​ စီမံကိန်းများ နှင့် ခုခံတော်လှံမှုတို့ဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်။
အောက်ပါ tweets များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပွဲတော်အတွင်း မည်သည်တို့ကို ဆွေးနွေးတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။
La mejor respuestaala indignación y el hartazgo es soñar y trabajar por otro futuro.#LaOcupación es un espacio para soñar en colectivo. pic.twitter.com/lUzMZNNQ68
— Armando Sobrino (@Armandosmh) August 30, 2017
ရက်စက်ရမ်းကားမှုတွေ နဲ့ ဒုက္ခပေးနှောင့်ယှက်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်နည်းကတော့ အနာဂတ်သစ်တစ်ခုကို စိတ်ကူးမျှော်မှန်းပြီး ရရှိအောင်ကျိုးစားတာပါပဲ။​ #TheOccupation ကတော့ အတူတကွ မျှော်လင့်ချက်ထားရမယ့် နေရာတစ်ခုပါပဲ။
Feminizar la politica es dejar de privilegiar la verticalidad de las formas tradicionales de hacer política @Susanaochoach en #LaOcupación pic.twitter.com/ibwTf6wXGd
— Ana Estudillo (@AnaEstudillo) September 1, 2017
နိုင်ငံရေးမှာ အမျိုးသမီးများတန်းတူဖြစ်ရေး၊ လွတ်မြောက်ရေး ထည့်သွင်းဖို့ဆိုတာ သမရိုးကျနိုင်ငံရေးရဲ့ အဆင့်ဆင့်လုပ်တွေထားတာအား ပုံသေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ ရပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ @Susanaochoach in #LaOcupación
အချို့ကတော့ The Occupation ကို စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က မက္ကစီကိုသမ္မတက ငါးကြိမ်မြောက်အစိုးရအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြရာ၍ ပုံသေပုံစံကြီးနှင့်ပြောသောမိန့်ခွန်းဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြကြသည်။​ ၎င်းကို twitter တွင် #5toInforme (ပဉ္စမအစီရင်ခံစာ) ဟု ခေါ်ဝေါ်နေကြသည်။
El país que perece, en el #5toInforme;
El país que nace, en #LaOcupación pic.twitter.com/fLIjAirmw9
— Alejandro Encinas N (@EncinasN) September 2, 2017
#5toInforme (#ပဉ္စမအစီရင်ခံစာ) မှာ ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ နိုင်ငံတော် (ယာဘက်)
#TheOccupation မှာ ပြန်မွေးဖွားလာတဲ့ နိုင်ငံတော်။ (ဝဲဘက်)
En #LaOcupación nos preguntamos, ¿Por qué reemplazarles? En el #5toInforme nos responden. pic.twitter.com/jHUkKgPn3J
— Damián Carmona (@DamianCarMor) September 2, 2017
#TheOccupation မှာ သူတို့ကို ဘာကြောင့် အစားထိုးပစ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာကို ကျွနု်ပ်တို့ မေးကြည့်ကြပါတယ်​။​ (ယာဘက်) #5toInforme (#ပဉ္စမအစီရင်ခံစာ) မှာ [အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုယ်တိုင်] ကျွနု်ပ်တို့ကို ပြောပြလိုက်တယ်။ (ဝဲဘက်)
ဒီအချက်ကို ပဲ့တင်ပြုကာ Wikipolitics Jalisco အဖွဲ့ဝင် Damian Carmona က သူ၏ ဘလော့တွင်ရေးသားထားသည်မှာ။ ။
Fueron días en los que nos unimos no sólo con el fin de soñar, sino de sentir una necesidad: reemplazarles. Reemplazarles no es una declaratoria de guerraalas personas que habitan los partidos, es una declaratoria contra las formas tradicionales de hacer política -dentro y fuera de los partidos- y les pido no se inquieten ante esta declaratoria, pero si lo hacen, pregúntense si no es porque temen perder el privilegio que les ha otorgado las formas tradicionales de hacer política.
တချို့နေ့ရက်တွေမှာ ကျနော်တို့တွေစည်းလုံးကြတာဟာ မျှော်လင့်ချက်ထားဖို့ဆိုတာတစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့သာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လိုအပ်ချက်တစ်ခုတွက် အတူတကွရှိနေရမယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လို့ပါ။​ ပြောင်းလဲမှုပါ။ အကျင့်ပျက်ချစားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပြောင်းလဲပစ်မယ်ဆိုတာက နိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေအားလုံးကို စစ်ကြေညာတာ မဟုတ်ပါဘူး။​ ရှေးရိုးဆန်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအပေါ်ကိုသာ ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။​ အဲ့တာက နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ နယ်ပယ်အထဲမှာကော အပြင်မှာပါရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါ။​ ဒီထုတ်ကြေညာချက်ကိုဖတ်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။​ အကယ်၍​ ဖြစ်ခဲ့ရင် သင်ကိုယ့်သင်ပြန်မေးကြည့်ပါ၊​ အဲ့ဒါက ဒီသမရိုးကျနိုင်ငံရေးက သင့်ကိုပေးထားတဲ့ အခွင့်ထူးတွေကို ဆုံးရှုံးရတော့မှာကို ကြောက်နေလို့လားဆိုတာ။
ပွဲတော်၏ နောက်ဆုံးရက်တွင် Wikipolitica ဝိုင်းတော်သားများနှင့် ပေဒရိုကူမာမိုတို (Pedro Kumamoto) တို့သည် လှုပ်ရှားမှု၏ အနာဂတ်အစီအစဉ်များကို ကြေညာခဲ့ကြသည်။​ ထိုအထဲတွင် ကူမာမိုတိုသည် မက္ကစီကို လွှတ်တော်အတွင်းသို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အရွေးကောက်ခံဝင်ပြီး လှုပ်ရှားမှု၏ အစီအစဉ်များကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏တံတိုင်းအတွင်းသို့ ယူသွင်းသွားရန်တို့ ပါဝင်သည်။
ထို့နည်းတူစွာပင် Wikipolitics ၏ အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦးတို့သည်လည်း ဥပဒေပြုလွှတ်တော် အသီးသီးသို့ ဥပဒေပြုအမတ်များဖြစ်အောင် ကျိုးပမ်းသွားကြမည် ဖြစ်သည်။
Qué gran momento para la noticia: @pkumamoto buscará llegar al Senado. ??
Ahí, donde antenoche se reflejó la descomposición política. pic.twitter.com/aSFmpD9QDE
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) September 2, 2017
သတင်းကောင်းတွေကြားရမယ့် အချိန်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။​ @pkumamoto က လွှတ်တော်ထဲမှာ နေရာရအောင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်တော့မယ်။ ဒီနေရာကတော့ ယို့ယွင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးကို မနေ့ညက ငြင်းဆန်လိုက်တဲ့ နေရာပါပဲ။​
ဤလှုပ်ရှားမှုများသည် မကြာသေးခင်က မက္ကစီကိုလူထု၏ သဘောထားကို တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့သည့် အကျင့်ပျက်ချစားသည့် သတင်းဆိုးများအကြားမှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။​ ဥပမာတစ်ခုဆိုရလျှင် #LaEstafaMaestra ကိုကြည့်ပါ။​
သတင်းဌာတစ်ခုဖြစ်သော Animal Político ၏ ထုတ်ဖော်ချက်အရ အစိုးရသည် ကုမ္ပဏီအတုအယောင်ပေါင်း ၁၂၈ခုကို ခုတုံးလုပ်ခဲ့ကာ ပြည်သူပိုင် ဘဏ္ဏာများကို လွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူပင် Mexicans Against Corruption and Impunity (အကျင့်ပျက်ချစားမှုနှင့် တရားဥပဒေမဲ့မှုကို ဆန့်ကျင်ရေး မက္ကစီကန်အဖွဲ့) သည် ရှေ့နေချုပ်ဟာ သူ့ Ferrari ကားကို အခွန်မဆောင်ချင်သ၍ ပရဟိတဟု လိမ်ညာမှတ်ပုံတင်သည်ကို လူအများအား ချပြခဲ့သည်။​
¡Este muro ya cayó! #LaOcupación #LosMurosSíCaen pic.twitter.com/8gmplMn4A4
— Wikipolítica CDMX (@WikipoliticaCMX) September 3, 2017
လတ်တလော မက္ကဆီကို မှ သတင်းများ
ပြည်သူသတင်း3အောက်တိုဘာ 2015
မက္က​စီ​ကို: ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​အတွက် ပန်းထိုး​ခြင်း
စစ်ပွဲနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ 11 ဩဂုတ် 2012
အရှေ့အာရှ2ဩဂုတ် 2017